Semalt द्वारा प्रमाणित तपाईंको Ecommerce बिक्री बढाउने 10 तरिकाहरू
वास्तवमा, ईकामर्स व्यवसाय मालिकहरूले उनीहरूका उत्पादनहरूबाट धेरै पैसा कमाउँदैछन्। स्टिस्टाले हालसालै गरेको एउटा अध्ययनले देखायो कि २०१ retail मा विश्वव्यापी रिटेल ईकॉमर्स बिक्री २.8686 ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा परिणत हुनेछ। दुर्भाग्यवस, तपाईं केवल ई-वाणिज्य स्टोर निर्माण गर्नुहुन्न र ग्राहकहरूले तपाईंको साइटमा बाढी आउने आशा राख्नुहुन्छ। तपाईंले खरीदारहरूको रुचि आकर्षित गर्न सफल मार्केटिंग अभियानमा सामिल हुनु आवश्यक छ।
राम्रो समाचार यो छ कि Semalt डिजिटल सेवाहरू द्वारा प्रमाणित मार्केटिंग रणनीतिहरूको साथ तपाईं आफ्नो eCommerce बिक्री बढाउनुहुनेछ। इभान कोनोवालोभ , Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, ई-कॉमर्स स्टोरले के कस्ता युक्तिहरूमा समृद्धि हुनको लागि लागू गर्नुपर्दछ भन्नेमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन्छ।
१. अप-सेलिंग र क्रस-सेलिंग प्रयोग गर्नुहोस्
अप-सेलिंग र क्रस-सेलिंग निश्चित फायर तरिकाहरू हुन् जुन तपाईं अनलाइन बिक्री बढाउन रोजगार दिन सक्नुहुन्छ। क्रस-बेच्न भनेको ग्राहकले खरीद गर्न खोजेको कुरासँगै सम्बन्धित उत्पादनहरू परिचय गराउने माध्यम हो। यसले ग्राहकलाई छनौट गर्न धेरै पूरक उत्पादनहरू दिन्छ। अप-सेलिंग भनेको ग्राहकले किनेको उत्पादको अधिक उत्कृष्ट संस्करण बेच्नको कार्य हो। यस विधिले तपाईंको ग्राहकलाई उन्नत सुविधाहरू र उच्च मूल्यको साथ समान उत्पादन हेर्न अनुमति दिन्छ।
यी बिक्री प्रविधिको ग्राहकहरु लाई अन्य उत्पादनहरु लाई किन्न प्रोत्साहित गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ। सत्य यो हो कि जब ग्राहकहरूले आफूले चाहेको भन्दा बढी देख्छन्, उनीहरू अधिक खरीद गर्न प्रेरित हुनेछन्। बहुविध अध्ययनहरूले देखाए कि अप-सेलिंग र क्रस-सेलिंगले ग्राहकहरूलाई अधिकका लागि फिर्ता आउन प्रोत्साहित गर्दछ।
२. तपाईंको वेबसाइट डिजाइन सुधार गर्नुहोस्
आजको डिजिटल युगमा, तपाईलाई अनुकूलन वेबसाइट डिजाइनको आवश्यक पर्दछ सम्भावित ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न र संलग्न गर्न। तपाईंको eCommerce स्टोर कम्पनीको अंश हो, र यसको डिजाईनले तपाईको ब्रान्ड कत्तिको पेशेवर हो प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ। वास्तवमा, तपाइँको प्रचार अभियानहरु तपाइँको स्टोर बाट पनि शुरू हुनुपर्छ। Semalt विशेषज्ञहरु यो तथ्य लाई उजागर गर्दछ कि ग्राहकहरु प्राय: अनलाइन स्टोर बेवास्ता गर्छन् यदि यो महत्वपूर्ण अनुकूलन को अभाव छ।
राम्रोसँग डिजाईन ईकमर्स स्टोर निर्माण गर्नु प्रतिस्पर्धीहरूलाई जित्नको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो। यदि तपाईं आफ्नो स्टोरलाई पुन: डिजाइन गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यो पक्का गर्नुहोस् कि यसको उत्तरदायी डिजाईन छ, जसले ग्राहकहरूलाई एक अद्भुत शपिंग अनुभव दिन्छ। वास्तवमा, तपाईं अधिक बिक्री ड्राइभ जब तपाईं यो वेबसाइट मा उत्पादहरु लाई नेभिगेट गर्न र पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँदछ।
Your. तपाइँको साइट मोबाइल मैत्री बनाउनुहोस्
पछिल्ला केही वर्षहरूमा बजारमा थुप्रै नयाँ ट्याब्लेट र स्मार्टफोनहरू आएका छन्। यसले अनलाइन खरीददारहरूको संख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि गरेको छ। अध्ययनले देखाउँदछ कि मोबाइल खरीददारहरूको संख्या डेस्कटप प्रयोग भन्दा बढी छ। यो डिजिटल युगमा, तपाईंको eCommerce स्टोर बिल्कुल विभिन्न मोबाइल उपकरणहरूमा अपनाईएको बनाउनु तपाईंको व्यापारको सफलताको आवश्यक अंश हो।
गुगलले वेबसाइटहरूका लागि मोबाइल खोजी क्रमलाई बढावा दिन्छ जुन मोबाइल उपकरणहरूमा उचित रूपमा प्रदर्शन हुन्छ। तपाईंको हालको वेबसाइट साइटको मोबाइल संस्करण सिर्जना गर्न तपाईं रूपान्तरण प्लेटफर्म वा मोबाइल प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाईल मैत्री ई-वाणिज्य स्टोर सिर्जना गर्नु राम्रो तरीका हो जुन तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई मोबाइल शपर्सलाई बेवास्ता गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। स्टोरको मोबाइल अप्टिमाइजेसनको साथ, तपाईं रूपान्तरण दर बढावा र बिक्री बढाउनुहुनेछ।
Good. राम्रो गुणको उत्पादन छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्
छविहरू थप्नका लागि कुनै उत्पाद छवि प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईंको उत्पादको छवि एक उच्च गुणवत्ता हुनुपर्छ। यो सत्य हो कि पेशेवर उत्पादन छविहरू प्राप्त गर्नु कठिन कार्य हुन सक्छ, तर यो पनि सत्य हो कि तिनीहरूले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको भण्डारमा आकर्षित गर्न मद्दत गर्छन्। हाम्रो विज्ञहरूले धेरै पटक प्रमाणित गरे कि जुम-इन विकल्पहरूको साथ स्पष्ट आईटम छविहरू थपेमा सम्भावित ग्राहकहरूलाई उत्पादन खरीद गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
Product. अनुकूलन उत्पाद पृष्ठ वर्णन
तपाईंको उत्पाद पृष्ठ वर्णन मा खरीद गर्न ग्राहकहरु लाई लुक्न सक्ने क्षमता छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले उपयोगी सुविधाहरूको वर्णन गर्नु भएको छ जसले ग्राहकहरुलाई चासो दिन्छ फनेलको तल उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस्। अधिक लोकप्रिय ईकामर्स साइटहरू अमेजनले बिक्री सुधार गर्न उनीहरूको उत्पाद कुञ्जी सुविधाहरू प्रदर्शन गर्दछ।
विवरणहरू राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्दछ जसले गर्दा कुनै पनि सम्भावित ग्राहकले तिनीहरूलाई पढ्न प्रोत्साहित गर्नेछ। तपाईं उत्पादनको मुख्य सुविधाहरू प्रदर्शन गर्न आकर्षक छोटो बुलेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै श .्का छैन कि तपाइँ धेरै बिक्रीमा हराउनुहुनेछ जब विवरणहरू कि तपाइँको ग्राहकलाई खरीद गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ वर्णन मा लुकेका छन्।
Short. छोटो प्रमोशनल भिडियो भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्
भिडियो अभियान धेरै ईकामर्स स्टोरहरूको एक महत्वपूर्ण मार्केटिंग रणनीति हो, बिक्री बढाउनको लागि प्रयोग गरियो। आजको मोबाइल-सक्षम उपभोक्ताहरूले सामग्रीको अन्य प्रकारको भन्दा भिडियोहरू हेर्न रुचाउँछन्। तपाईंको उत्पादनहरूको रोचक छोटो प्रमोशनल भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंको उत्पादनहरूका महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू समावेश गर्नुहोस् जुन ग्राहकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ। यी भिडियोहरू विभिन्न उत्पाद वेब पृष्ठहरूमा एकीकृत गर्नुहोस्।
तपाईंले एक्सपोजर बढाउनको लागि सबै लोकप्रिय भिडियो साइटहरूमा उत्पादन भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको शीर्षक र वर्णनमा कुञ्जी शब्दहरू थपेर SEO को लागि तपाईंको भिडियोहरू अप्टिमाइज गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईले आफ्नो वेबसाइट ठेगानालाई वर्णनको रूपमा पाठमा ट्राफिक पनि ड्राइभमा थप्न सक्नुहुन्छ।
A. एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव सिर्जना गर्नुहोस्
ईकामर्स क्षेत्र मा अवस्थित जबरदस्त विविधता कम्पनीहरु को लागी प्रतिस्पर्धा भन्दा अलग सेट गर्न को लागी कठिन बनाउँछ। जे भए पनि तपाईलाई कत्ति अनौंठो लाग्छ तपाईका उत्पादनहरू छन्, त्यहाँ अर्को सायद बाहिर पसल छ, जसले तपाईको लक्षित बजारलाई उस्तै वा समान उत्पादनहरू प्रदान गर्दैछ। यदि त्यो केस हो भने, त्यसो भए तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ब्रान्डलाई हजारौं अन्य ब्रान्डको दायराबाट अलग देखिन? एउटा अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव यो हो कि तपाइँको ब्रान्डलाई विशेष बनाउँदछ। तपाईंले राम्रो अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव लेख्नु पर्छ जुन तपाईंको उत्पादलाई मूल्यलाई सम्बोधन गर्दछ। यसलाई प्रदान गर्दै, तपाईं प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुनेछ, र नेतृत्वको फाइदाहरूको आनन्द लिनुहुनेछ।
एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव रूपान्तरण दर बढाउनको लागि तपाईंको होमपेज, उत्पाद पृष्ठ, र विज्ञापन पृष्ठमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। तपाइँको ब्रान्डलाई अन्य ब्रान्ड बाहेक सेट गर्दछ भन्ने कुराको ज्ञानले तपाईंलाई सफल ईकामर्स व्यवसाय चलाउन मद्दत गर्दछ। यो रणनीतिले तपाईंलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूबाट अलग गर्न मद्दत गर्दछ।
Free. नि: शुल्क र सजिलो रिटर्न प्रस्ताव
यस मार्केटिंग युक्तिले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंबाट खरीद गर्न र बिक्री सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्दछ। अनलाइन उत्पादन रिटर्नले धेरै ईकामर्स ब्रान्डहरूलाई ग्राहक वफादारी लिन र मद्दतको लागि फिर्ता आउन इच्छुक बनाउन मद्दत गरेको छ।
ई-वाणिज्य व्यवसायमा अनलाइन खुद्रा रिटर्नहरू सामान्य छन्, र ग्राहकहरूले समय-समयमा उनीहरूले खरीद गरेका उत्पादनहरू फर्काउँदछन्। तपाईंको ग्राहकले क्षतिग्रस्त भएको वा फिट नभएको उत्पादन फिर्ता गर्न निर्णय गर्न सक्दछ। ग्राहकहरु तीन मध्ये एक उत्पादन बाट लगभग फिर्ता। वास्तवमा, अधिकांश ग्राहकहरूले खरीद गर्नु अघि फिर्ताको नीति समीक्षा गर्छन्।
यदि सम्भावित ग्राहकहरूलाई थाहा छ कि तिनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा सामानहरू फिर्ता गर्न सक्छन्, तिनीहरू सम्भवतः फेरि फिर्ता आउनेछन्। वाल स्ट्रिट जर्नल द्वारा गरिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ कि सब भन्दा राम्रो ग्राहकहरू नै उच्च फिर्ती दरहरू हुन्। तपाईंको अभ्यासमा यस नीतिको कार्यान्वयनले तपाईंलाई ठूलो बिक्री र व्यापारिक अवसरहरू गुमाउनबाट जोगिन मद्दत गर्दछ।
Your। तपाइँको गृह पृष्ठमा उत्पादन प्रदर्शन गर्नुहोस्
तपाईंको गृह पृष्ठ तपाईंको ईकामर्स वेबसाइटको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो त्यसैले तपाईंले ग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्नको लागि प्रयोग गर्नु पर्छ। सर्वश्रेष्ठ बेच्ने उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् ता कि सम्भावित ग्राहकहरूले स्पष्ट रूपमा उनीहरू देख्न सक्दछन्। यो अधिक सम्भावना छ कि कुनै पनि किनमेल गर्ने सामान अन्य पृष्ठहरू मार्फत तपाईंको eCommerce स्टोरमा आउँछ अन्य पृष्ठहरू हेर्नको लागि गृह पृष्ठ भ्रमण गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ। त्यसो भए, तपाईको सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू गृह पृष्ठमा राखी अपरिहार्य रूपमा बिक्री बढाउँदछ।
१०. बहु वितरण विकल्पहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्
धेरै वितरण विकल्पहरूको साथ ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्न तपाईंको बिक्री बढावा दिनेछ। अचम्मको कुरा, तर गुणात्मक उत्पादनहरू बेच्ने व्यवसायहरूले असाधारण अनलाइन अनुभव प्रस्ताव गर्दछन् जब यो डेलिभरीको कुरा आउँदछ। यदि तपाईं ग्राहकहरूलाई तपाईंबाट खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए बहु वितरण विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न तयार हुनुहोस्। यस्तो उपयोगी मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ, तर यसले तपाईंलाई सम्भावित ग्राहकहरू गुमाउनबाट जोगिन र तिनीहरूलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूमा जान दिन मद्दत गर्दछ।
यो स्पष्ट छ कि इन्टरनेटले मान्छेको खोजी र उत्पादनहरू खरीद गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ। यी दिनहरू डेस्कटप वा मोबाइल उपकरणको साथ तपाईं अनलाइन केहि पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिहरू ईकामर्स व्यवसायमा सामेल हुन बढ्दो इच्छुक छन्। अनलाइन शपिंगको बढ्दो लोकप्रियताको गतिलाई निरन्तरता दिन, Semalt डिजिटल सेवाहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको पेशेवर सहयोगलाई तपाईंलाई स्वागत छ।